InVideo: Yenza iiVidiyo eziNgcono zoLuntu kwiiMidiya zeNtlalo ngaphakathi kweMizuzu Martech Zone
InVideo: Yenza iiVidiyo zaBantu abaSetyenziswayo kwiiMidiya zeNtlalo ngaphakathi kweMizuzu
NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 7, 2021 Douglas Karr
Zombini iipodcasting kunye nevidiyo ngamathuba amangalisayo okunxibelelana nabaphulaphuli bakho ngendlela ebandakanya kakhulu kwaye eyonwabisayo, kodwa izakhono zokuyila kunye nokuhlela ezifunekayo zinokuba kude kakhulu kuninzi lweshishini '- ungasathethi ke ngexesha kunye nenkcitho.
IvidiyoVidiyo inazo zonke iimpawu zomhleli osisiseko wevidiyo, kodwa eneempawu ezongeziweyo zentsebenziswano kunye neetemplate ezikhoyo kunye nezixhobo. I-InVideo ine-4,000 yeetemplate zevidiyo esele zenziwe kunye nezigidi zeasethi (imifanekiso, iaudiyo, kunye nevidiyo) onokuyihlela ngokulula, uyihlaziye, kwaye uyikhuphele ukukunceda ekwenzeni ii-intros zobungcali, ii-outros, iintengiso zevidiyo, okanye iividiyo zonke oza kuzisebenzisa kwimidiya yoluntu.
I-InVideo yinjongo eyakhelwe amashishini, iingcali zentengiso, kunye neengcali zentengiso ukwenza ngokulula kunye nokupapasha iividiyo zabo. Iqonga likwenza ukuba ukwazi ukwenza ngokwezifiso iakhawunti yakho ngohlobo lwakho loyilo kunye neemeko zokusebenzisa ukuze ezo templates zibekwe phambili.
Unokwenza iakhawunti yakho ngokwezifiso kunye nelogo yakho, iifonti, kunye nemibala ephambili ukuze zisetyenziswe ngokulula kwiitemplate zakho. Kwividiyo nganye, unokufaka nelizwi lakho, ividiyo, iaudiyo, okanye imifanekiso onqwenela ukuyifaka- ke awukhawulelwanga kwiitemplate zabo okanye kwilayibrari yeeasethi.
Unakho kwakhona ukuqhagamshela iFacebook yakho, iTwitter, kunye neeakhawunti zeYouTube kwaye upapashe ngokuthe ngqo xa ujongile kwaye uvumile ividiyo egqityiweyo.
Fumana iipesenti ezingama-25 kwiRhafu yeVidiyo yakho
Inqaku kuHlelo lweVidiyo
Esinye isixhobo esimnandi abanaso kukukopa okanye ukuncamathisela isicatshulwa, okanye ukukrola umbhalo kwinqaku. Ke, ukuba ufuna ukwenza iividiyo ezimfutshane, ezimfutshane ezibandakanya amanqaku aphambili kwinqaku lakho ukukhuthaza ngemidiya yoluntu.
Yakha iiVidiyo zoLudwe
Olunye usebenziso olukhulu loku kukwenza iividiyo ezinoluhlu ... ezaziwa kakhulu kwimidiya yoluntu. Ndikwazile ukuyakha le vidiyo malunga nemizuzu eli-10, ndilayisha ezam izikrini kwaye ndisebenzisa enye yeetemplate zeVenkile yeVidiyo yeVidiyo:
I-interface yebhodi yebhodi yokwenza amabali okanye i-listicles inembile kwaye kulula ukuyisebenzisa. Ungancamathisela kwiskripthi sakho kwaye uzenzele ngokuzenzekelayo ngokusekwe kwitemplate!
I-Intro kunye neVidiyo eziNgaphandle ngeLogo iTyhila iiTemplate
Namhlanje, ndikwazile ukuhlela kunye nokuyila ilogo encinci yoopopayi etyhila eyam Martech Zone Iividiyo zisebenzisa i-logo yeVidiyo ekwiVidiyo ityhila itemplate:
Ndikwazile ukuguqula iifonti, amaxesha ecandelo ngalinye, kunye noopopayi ukuyila ividiyo entle entle endinokuthi ngoku ndiyongeze kuzo zonke iividiyo endizipapashayo kwiYouTube!
Bhalisa ku Martech Zone kwi-YouTube
Uyenza njani iVidiyo kwiTemplate yeVidiyo
Ujongano lomsebenzisi lokukhaba ividiyo yakho ilula ngokumangalisayo… khetha itemplate esele yenziwe, itemplate yokubhaliweyo ukuya kwividiyo, okanye qala nje ngeteyile engenanto.
Ukuba ujonge itemplate, ngenisa nje amagama aphambili ukukhangela enye. Unokucofa kwaye udlale nganye kwiziphumo ukufumana itemplate onqwenela ukuqala ngayo.
Khetha ubungakanani bevidiyo-banzi (16: 9), isikwere (1: 1) okanye nkqo (9:16).
Yenza ukhetho lwakho, wenze ngokwezifiso ividiyo, emva koko unokuyikhuphela okanye uyipapashe ngokuthe ngqo kwi-Facebook, Twitter, okanye kwi-YouTube.
Ukuba ufuna ukwenza ividiyo ngokwezifiso ngakumbi, nantsi indlela entle yokuhamba yeqonga. Akukho nakuphi na ukusikelwa umda konke konke!
Ukuba ufuna ukwenza ividiyo ngokwezifiso ngakumbi, nantsi indlela entle yokuhamba yeqonga. Akukho nakuphi na ukusikelwa umda konke konke! Kwaye ... awuyi kulikholelwa ixabiso leqonga… ayothusi.
Owu ... kwaye kuba u Martech Zone umfundi, uya kufumana esinye isaphulelo se-25% xa usebenzisa ikhonkco lam:
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyenzayo: Ndingu IvidiyoVidiyo indibaniselwano (kunye nomthengi) kwaye ndisebenzisa ikhonkco lam kulo lonke eli nqaku.
tags: Umyili wevidiyo ye-FacebookUmenzi wevidiyo ye-FacebookUmhleli wevidiyo we-instagramIntro umenziungenisoisimemo sevidiyouluhlu lwevidiyoUmyili wevidiyo okwi-intanethiumhleli wevidiyo okwi-intanethiumenzi ongaphandleumenzi wevidiyo yokunyusavidiyoividiyo yemidiya yoluntuividiyo yentlaloUmyili weentengiso zevidiyoumenzi weentengiso zevidiyoumenzi wevidiyoitemplate zevidiyoUmenzi we-intro we-YouTubeUmyili wevidiyo yeYouTube
I-BEE: Yakha kwaye ukhuphele i-imeyile yakho ephendulayo kwi-Intanethi simahla